परी कथा परभक्षी
हामी अझै पनि छोराछोरी थिए जब रेड राइडिङ हुड को कथा हामी भन्दा हाम्रो मनपर्ने बीचमा थियो. हामी वयस्क जीवनको गर्न हुर्किसकेका छन् कि अब, यो कथा गर्न भावुक संलग्न एक बिट अझै पनि छ. यो NetEnt को विकास मा शोषण आशा के छ परी कथा परभक्षी: रातो राइडिङ हुड स्लट खेल.
नेट मनोरञ्जन देखि अवस्थित छ 1996 र स्वीडेन मा आधारित छ. NetEnt सिर्जना गरेका गर्न Java मंच प्रयोग अनलाइन क्यासिनो पहिलो विकासकर्ता छ. तथापि, HTML5 र फ्लैश प्रविधि जस्तै उन्नत मंच मा यो देखि सारिएको छ. यो विकासकर्ता वर्षौंदेखि खेल धेरै संग द्यूत संसारमा आशिष् दिनुभएको छ. विभिन्न खेल विधाहरू, NetEnt विशेष रूप स्लट खेल विकास ढाकिएको देखिन्छ.
परी कथा परभक्षी पाँच रील र बीस paylines संग अनलाइन स्लट खेल हो. यो खेल राम्रो तरिकाले डिजाइन र एक पृष्ठभूमि ट्युन जंगल मार्फत सार्दा गर्दा सामान्यतया सामना गर्न भनेर cacophony को comprises कि छ छ. रेड राइडिङ हुड को जंगल मार्फत उत्प्रेरित गर्छ रूपमा, तपाईं चराहरूको chirping र रूखहरू rustling सुन्न सक्नुहुन्छ; यो सबै खेल को प्रभाव बढाने.
मा परी कथा परभक्षी न्यूनतम राशि छ कि खेलाडीहरू एक स्पिन मा शर्त सक्छ 0.2 जबकि अधिकतम शर्त छ 200. जब तपाईँले पैसा विशाल ऐसे staking जस्तै महसुस, त्यहाँ स्पिन सर्कल छेउमा अधिकतम शर्त बटन भनेर सन्दर्भमा तपाईं बाहिर मदत गर्न सक्छ भन्ने छ.
परी कथा परभक्षी बोनस विशेषताहरु सक्रिय दुई मुख्य तरिका प्रदान गर्दछ. यसरी एक सन्दुक प्रतिमा प्रयोग मार्फत छ. जब यो रील मा मुलुकमा, तपाईंले तीन बोनस विकल्पहरू प्राप्त: निःशुल्क Spins, ब्वाँसो र सिक्का जीत खबरदार.
शुल्क स्पिन सुविधाले तपाईंलाई दस मुक्त spins दिन्छ. तपाईं रील मा सन्दुक भूमि यदि तपाईं निःशुल्क स्पिन retrigger गर्न सक्नुहुन्छ. एक सन्दुक तपाईं अतिरिक्त दुई निःशुल्क spins दिन्छ. अन्त मा, यो पचास मुक्त spins को कुल परिणाम. पक्कै पनि, पचास मुक्त spins तपाईं आफ्नो भाग्यशाली ब्रेक प्राप्त गर्न लागि पर्याप्त छन्.
संग सिक्का जीत सुविधा, तपाईं अनियमित भुक्तानी योगफल दिइएको. यो होसियार हुनुहोस् ब्वाँसो सुविधाले तपाईंलाई हजुरआमा घरमा गर्न जंगल मार्फत रेड राइडिङ हुड मार्गदर्शक शामिल. तपाईं यो राम्रो पर्याप्त गर्छन् भने, त्यो ठूलो खराब ब्वाँसो को खाजा बन्न सक्छ.
परी कथा परभक्षी बोनस सुविधाहरू धेरै संग एउटा एकदमै रोचक खेल हो. बोनस सुविधाहरू संयोजन र सुन्दर डिजाइन खेल बनाउन एक प्रकार को.
कहानी परभक्षी: Hansel र Gretel
A Dragon’s Story
Online Slots | Dark Knight Rises | 243 Ways to WIN!
शीर्ष क्यासिनो संबद्ध कार्यक्रम